AI Fuzzy Logic (သို့) ဇဝေဇ၀ါ ယုတ္တိဗေဒ မိတ်ဆက် [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ > AI Fuzzy Logic (သို့) ဇဝေဇ၀ါ ယုတ္တိဗေဒ မိတ်ဆက်
View Full Version : AI Fuzzy Logic (သို့) ဇဝေဇ၀ါ ယုတ္တိဗေဒ မိတ်ဆက်
AI Fuzzy Logic (သို့) ဇဝေဇ၀ါ ယုတ္တိဗေဒ မိတ်ဆက်
AI (Artificial Intelligence) [သို့မဟုတ်] လူတို့ဖန်တီးသတ်မှတ်ထားသည့် သဘာဝမဟုတ်သော ဥာဏ်စဉ် ဟူသော ဝေါဟာရကို ယနေ့ခေတ် ကွန်ပျူတာစာအုပ် အတော်များများတွင်လည်းကောင်း၊ Robotics နှင့် Automachine နယ်ပယ်ရှိ စာအုပ်စာတမ်းများတွင်လည်းကောင်း မကြာခဏတွေရှိရတတ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၄၀ ခန့်မှအစပြု၍ ကွန်ပျူတာနယ်ပယ်တွင်လည်း Soft Computing နှင့် Hard Computing ရယ်လို့ Software နယ်ပယ်လောက မှာတွင်ပင် နှစ်မျိုးကွဲခဲ့ကြသည်။
Soft Computing ကတော့ မရေရာမှု သီအိုရီ (uncertainty theory) နှင့် တပိုင်းတစိတ်မှန်ကန်မှု သီအိုရီ (Theory of Partial Truth) တို့တွင်အခြေခံကာ၊ Hard Computing ကတော့ Mathematics တွေရဲ့ Model တွေမှာ အခြေခံ လာတာကိုတွေရပေလိမ့်မည်။ ယင်းတို့နှစ်ခုအနက် Soft Computing သည်ပို၍နက်နဲသိမ်မွေ့ကာ ယင်း၏ပင်မ Role Model မှာလည်း လူ့စိတ်နေစိတ်သဘောတို့တွင်အခြေပြုပါသည်။ Soft Computing ၏ ပင်မခေါင်းစဉ် အောက်တွင်တော့ ယင်းဘာသာရပ်၏ အခြေခံ Model များဖြစ်သည့် Neural Networks, Fuzzy Logic Sets များနှင့် Cellular Automata အစရှိသည်တို့ပါဝင်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ Soft Computing ဟု ဝေါဟာရ အသစ် နှင့် Concept ကိုတည်ထွင်ခဲ့သူဖခင်ကြီးကား University of California မှ Dr. Lofti A. Zelda ဖြစ်ပါသည်။ Soft Computing များ၏ အခြေခံ ဇာစ်မြစ် အစစ်အမှန်ကတော့ ဇီဝတွင်းဖြစ်ပျက်မှုများ နှင့် လူ့အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းတို့ဖြစ် ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော် လူကဲ့သို့ စဉ်းစားတွေးတော နိုင်စွမ်းရှိသော ကွန်ပျူတာများကိုတည်ထွင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
Fuzzy Set Theory ကို ၁၉၆၅ ၀န်းကျင်ခန့်တွင် Dr. Lofti A. Zelda ကစတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကာ ကွန်ပျူတာလောကကို တစ်ခေတ်ဆန်းသစ်စေခဲ့ ပါသည်။ ဂန္တ၀င် Set Theory တွင်ပဲ Fuzzy Set Theory ကိုအခြေတည်ခဲ့ပါသည်။ အဓိက ကွဲပြားချက်ကတော့ မသေချာမှု uncertainty များကို ဆုံးဖြတ်သည့် အခါတွင် ဂန္တ၀င် set theory မှာကဲ့သို့ ပြတ်ပြတ်သားသား မဆုံးဖြတ်ပဲ interval တစ်ခုအတွင်းမှာ ဇဝေဇ၀ါ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လည်း ဇဝေဇ၀ါ ယုတ္တိဗေဒ (Fuzzy Logic) ဟုအမည်တွင်ပါသည်။ Fuzzy Logic သည် လူ့အတွေးခေါများနှင့် အတော်တူပါသည်။ If .............Then..............Else အစရှိသည့် statements ၃ မျိုးတွင်ခြေခံပါသည်။ အကယ်၍ အခြေအနေတစ်ခုသည်မှန်ခဲ့သော် မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း နှင့် မမှန်ခဲ့သော် မည်သို့ဆက်လက်စစ်ဆေးမည်နည်း ဟူသော ဖော်ပြချင်များသည် Fuzzy Logic ၏ အနှစ်သာရ အစစ်မှန်ပင်ဖြစ်သည်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ထမင်းကို နာရီဝက်၊ လေးဆယ့်ငါးမိနစ်၊ တစ်နာရီ စသည်ဖြင့် ကိုလိုတဲ့ အချိန်လောက်မှာ ကျက်အောင် ထိန်းညှိလို့ ရတဲ့ ထမင်းပေါင်းအိုးတွေ တွေ့ ရပါတယ်။
အဲ့ဒါတွေဟာ Fuzzy Logic ကြောင့် ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာလို့ ပြောကြပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျည်ဆန် ရထားတွေမှာလဲ Fuzzy Logic ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက တော်တော်လေး အရေးပါတယ်လို့ လဲဆိုပါတယ်။
Arithmetic logic ကိုတွေတော့ ကျောင်းတုန်းက formula လေးကို သတိရမိတယ်ဗျာ..2power n, n=number,........ဥပမာဗျာ..၁၂၃ ဆိုရင် ၁၂၃ . ၂၃၁.၃၂၁ ရှေ့နောက်တွေစဉ်လိုရတယ်ဗျာ...အဲလိုပဲ...binary မှာဂဏန်းနှစ်လုံးပါရင် သူရဲ့  ဖြစ်နိုင်ချေက ၀၀ (သို့) ၀၁ (သို) ၁၀ (သို့) ၁၁ ဆိုပြီး ၄ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာ... ဂဏန်းသုံး လုံးပါရင်...2 power3ဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်တဲအရာက ၈ခု ....... ဂဏန်းလေးလုံးဆိုရင် ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်တဲအရာက ၁၆ခုဗျာ. ကျန်တဲဟာတွေကတော ဖော်မြူလာနဲပဲတွက်လိုက်တောဗျာ... အဲလိုနဲပဲကွန်ပြူတာဖြစ်လာတာလိုသိတယ်....ဒစ်ဂျစ်တယ်ပေါဗျာ.....